NADIIFIN: Barcelona Oo Shan Xidig Iska Fasaxeysa Si Ay U Hesho Saxiixa Antoine Griezmann – Gool FM
(Arsenal) 30 Abriil 2018. Ernesto Valverde ayaa magacaabay shan ciyaaryahan si uu u iibiyo suuqa kala iibsiga ee soo aadan, isla markaana dhaqaalaha kaga soo xarooda uu qeyb kag dhigo dalabka uu doonayo inuu ka gudbiyo weeraryahanka Atletico Madrid Antoine Griezmann.
Wargeyska “Don Balon” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in isbuucyadii lasoo dhaafayay ay kooxda Barcelona heshiis kama dambeys aah ay kala gaartay Barcelona dhigeeda Atletico Madrid saxiixa Antoine Griezmann, si ay kaga soo qaadato xili ciyaareedka soo aadan.
Barcelona ayaa la filayaa in heshiiska Antoine Griezmann ay ku qarash gareyn doonto aduun dhan 100 million euros.
Hadaba saraakiisha kooxda ree Catalonia ayaa lagu soo waramayaa in ay go’aansadeen iibinta xiddiga reer Brazil Rafinha Alcantara oo amaah ugu biiray Inter Milan, waxayna dooneysaa inay ku iibiso aduun dhan 30 million euros.
Sidoo kale Blugarana ayaa waxay dooneysaa inay ka fasaxdo garoonka Cump Nou xidigeeda Gerard Deulofeu oo isna heshiis amaah ah ku jooga kooxda Watford, waxayna ku qiimeesay aduun dhan 20 million euros.
Waxaa intaas sii dheer André Gomes oo isna lagu qiimeeyay 30 million euros, iyo daafacyada Alex Vidal iyo Lucas Digne oo ay Barcelona dooneyso inay kaga soo xaroodan qiimo gaarsiisan 35 million euros. si dhaqaalaha kaga soo xarooda ay ugu qarash gareeso saxiixa Antoine Griezmann.